माडीको सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेन – Nepaliko Aawaj
माडीको सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ०२, २०७६ | ८:३४:३०
चितवन- माडी ठोरी हुलाकी सडकअन्तर्गत रहेको माडीको बाटो अझै कालोपत्रे हुन सकिरहेको छैन । सडकको अवस्था वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ ।
माडीको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको आशीष कन्टक्सन प्रालिले माडीको सडक कालोपत्रे गर्ने भनी दशैँ अगावै सडकमा ग्राबेल बिछ्याएको समयावधि पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, आजसम्म माडीको सडक भने कालोपत्रे हुन सकिरहेको छैन ।
सडक कालोपत्रे नहुँदा सडकमा सवारी साधनहरु आवतजावत गर्ने क्रममा सडकमा कालोपत्रे गर्न भनी बिछ्याइएको ग्राबेल उछिट्टियर पैदल यात्रीहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ । केही समयअगाडिसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने भनी सडकमा बिछ्याइएको ग्राबेलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने क्रममा सडकबाट निस्किएको धुलोले माडीको जनजीवन नै प्रभावित बनेको थियो । तर, अहिले माडी नगरपालिकाको पहलमा सडकमा पानीको फोहरा दिने काम भने भएको छ । जसले गर्दा केही राहत मिलेको माडीवासीले नेपालीको आवाज डटकमसँग बताएका छन् ।
माडीको सडक साँघुरो र कालोपत्रे नभएका कारण माडीमा दिनप्रतिदिन सडक दुर्घटनाका घटनाहरु घटिरहेका छन् । माडीको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको आशीष कन्टक्सन प्रालिले आजसम्म काम नगर्दा पनि यस विषयमा माडी नगरपालिकाले कडा रुपमा आवाज उठाउन सकिरहेको छैन ।
माडीलाई इको नगरपालिका र सुन्दर नगरीको रुपमा विस्तार गर्ने भन्दै गर्दा र नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० को शुभारम्भ भएको अवस्थामा माडीको सडक आजसम्म पनि कालोपत्रे हुन नसक्नुले माडी विकासमा पछाडि परेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, यसो भनिरहँदा फेरि माडीमा माडीका सबै खोलाहरुमा पुल निर्माणको कामहरु भने अगाडि बढिरहेको छ । केही खोलाहरुमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
माडीको बाटो कालोपत्रे गर्न नसक्नुमा कुन पक्ष दोषी हो भनेर आजसम्म निर्क्योल हुन नसक्नु एकदम दुःखद कुरा हो । यदि आशीष कन्टक्सनले समयावधिमा काम गर्न सक्दैन भने यस विषयमा उसले गम्भीर भएर अर्को कम्पनीलाई दिनुपर्ने हो कि होइन ? अनि माडी नगरपालिकाले यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? माडीको बाटो कालोपत्रे नभएका कारण धुलोले माडीको पर्यावरणीय वातावरणमा नै गहिरो असर परिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा माडीलाई इको नगरपालिका बनाउछु भन्नु कतिसम्म लज्जाको विषय होला । त्यसैले माडीलाई इको नगरपालिकाभन्दा पनि पहिला माडीको सडक कालोपत्रे गरौँ अनि बल्ल माडीलाई इको सुन्दर नगरी बनाउँला हुँदैन र ?